काँग्रेस नेता निधिलाई यस्तो छ राजेन्द्र महतोको चुनौती ! | suryakhabar.com
Home राजनीति काँग्रेस नेता निधिलाई यस्तो छ राजेन्द्र महतोको चुनौती !
काँग्रेस नेता निधिलाई यस्तो छ राजेन्द्र महतोको चुनौती !
on: १८ मंसिर २०७४, सोमबार १६:२८ In: राजनीतिTags: काँग्रेस नेता निधिलाई यस्तो छ राजेन्द्र महतोको चुनौती !No Comments
महेन्द्रनगर, धनुषा । यसपालिको चुनावमा नेपाली काँग्रेसका विमलेन्द्र निधि र राजपाका नेता राजेन्द्र महतो उठेको धनुषा क्षेत्र नं ३ मुलुककै सर्वाधिक चासोको निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ ।
धनुषा–३ मा काँग्रेसका प्रभावशाली नेता निधि र राजपाका नेता महतोबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । वाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का रामसिंह यादवको उम्मेदवारी परेपनि तुलनात्मक रुपमा उनी कमजोर रहेको आकलन गरिएको छ ।
उनी चुनावमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र विकासमा दिएका योगदानका आधारमा मतदाताले मूल्याँकन गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् – ‘मेरा प्रतिष्पर्धी राजनीतिमा धेरै कनिष्ठ छन् । लगातार मन्त्री भए, खोइ के गरे रु एजेन्डा सेट गर्न उनीहरू अक्षम छन् ।’
सर्लाहीको बबरगन्जमा ५९ वर्षअघि जन्मेका महतोले मानविकी र कानुनमा स्नातकोत्तर हुन् । विसं २०४६ देखि राजनीतिमा होमिएका महतो सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष भएका थिए ।
Tags: काँग्रेस नेता निधिलाई यस्तो छ राजेन्द्र महतोको चुनौती !
प्रदेश नम्बर २ को पर्सामा यस्तो छ निर्वाचनको तयारी
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १६:२८